'Ngemuva kweqhwa', uhlelo lokusebenza olukhombisa ukuthi umhlaba uzolinakekela kanjani | | Isimo Sezulu Senethiwekhi
'Ngemuva kwe-Ice', uhlelo lokusebenza olukhombisa ukuthi umhlaba uyoba kanjani ngemuva kokubhebhetheka
Inkunzi yaseWall Street (New York) izocwiliswa ngemuva kokuncibilika.
Uma une-iPhone manje uzobona azoba njani amanye amakhona omhlaba ngemuva kokuncibilika kwezigxobo kubangelwe ukufudumala kwembulunga yonke kubonga uhlelo lokusebenza lwamahhala olwenziwe yiNew Yorker u-Justin Brice Guariglia.
Uhlelo lokusebenza, olubizwa ngokuthi »Ngemuva kweqhwa»(Ngemuva kweqhwa ngeSpanish), kuyathakazelisa kakhulu, ngoba ivumela abasebenzisi ukuthi babone ukuthi umhlaba wabo uzobukeka kanjani lapho ulwandle lukhuphuka.
IGuariglia isebenzise idatha ye-NASA emazingeni, i-geolocation kanye neqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona ukusinikeza umbono ngekusasa elikude kakhulu laseNew York nakwamanye amadolobha. Ngakho-ke, isithombe sokuqala esivela ngokushesha nje lapho ulanda uhlelo lokusebenza kuyisiqeshana seqhwa esiwayo, okuyilokho ebesekwenzeka isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka, yize kuvame kakhulu emashumini eminyaka amuva nje njengoba izinga lokushisa lomhlaba jikelele linyuka.
Ithuluzi lichaza lokho ulwandle eNew York lungakhuphuka cishe amamitha ayisithupha (6 izinyawo) ngasekupheleni kwekhulu leminyaka, ngaleyo ndlela sifaka isithombe esibaziwe seBull of Wall Street noma iMiami Beach, phakathi kwabanye.
IBull yaseWall Street (eNew York) ingacwiliswa ngemuva kokuncibilika. Isithombe - Climatecentral.org
»Ngemuva kwe-Ice» kuyingxenye yomsebenzi kaGuariglia, okwathi ngemuva kokuhamba neNASA eGreenland wasebenzisa izithombe ezithwalwa emoyeni njengesisekelo »sokupenda» izindawo ezinephrinta ephezulu. Ngenkathi egxile kulezo zindawo ezingafinyeleleki kubantu abaningi, uhlelo lokusebenza lukhombisa ukuthi zibaluleke kangakanani ukuqonda kangcono ukushisa komhlaba nokuthi kusheshe kangakanani ukuthatha izinyathelo ezisebenzayo zokukuvimba.
IHarvard University ingaba ngaphansi kwamanzi ngo-2100. Isithombe- Climatecentral.org
Futhi uma ungenayo i-iPhone futhi ufuna ukubona izithombe, ungabheka ngokwenza chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » 'Ngemuva kwe-Ice', uhlelo lokusebenza olukhombisa ukuthi umhlaba uyoba kanjani ngemuva kokubhebhetheka
U-El Torno uzilungiselela ukulwa nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu
Iminyaka eyishumi yokulwa nemiphumela yokushisa komhlaba